Yiziphi amaphilisi okuhlela izinwele zikhula zibheke ngakhona
izinwele enempilo, enhle futhi ucwebezela okulula nekama, zazivuma futhi ezithambile - iphupho zonke wesifazane. Futhi akumangalisi, ngoba izinwele uzilungise ezibhekwa esiyinhloko elikhangayo zesifazane. Kodwa abantu abaningi babhekana ngokuphumelelayo nezinkinga futhi azinakekele, kanye ukuvela dandruff, nezinwele noma ukulahlekelwa esinqunyiwe izinwele, ahlukanisa uphela. Kwenzeka kanjani ukuba wena kudingeka unakekele ukushaqeka zoboya ukuthi njalo wahlala aluhlaza, obukhulu, elimnandi brilliance iso impilo?
Ukuze kuzuzwe ngempela imiphumela ecacile, udinga isineke nokukhuthazela ekufezeni nezinqubo izinwele ukunakekelwa njalo. Ngaphezu zonke izinhlobo buso, isimo kanye neminye amalungiselelo zangaphandle, abasizi yakho kungaba amavithamini eliphezulu kanye amaphilisi ngoba izinwele zikhula zibheke ngakhona.
A ezihlukahlukene ejenti ezakhelwe izinwele
Enye yemikhiqizo ezithandwa kakhulu amaphilisi "Rinfoltil". Kudaliwe ngesisekelo sicashunwa amajikijolo palmetto Serenoa Repens. Umsoco lokho kusho ukwenza phezu ungqimba ejulile kwesikhumba bakuphi kunzima ukungena lapho isicelo ngaphandle tonic. Futhi kule amaphilisi eshiwo ngenhla izinwele ukukhula zihlanganisa i-caffeine, ezikhishwe of Mint enenhlamba, Camellia Chinese, ginseng, nasturtium ezinkulu, okuyinto zishukumisa umzimba ekhanda, ukuqinisa futhi uthuthukise izinwele. Enye izidakamizwa ukuthi ngezici zawo ezehlukile ezaziwa, - "Pantovigar". Lezi amaphilisi gelatin izinwele ukukhula asetshenziselwa ukuba ningabi nje kuphela isimo nezinwele ezinde yakho, kodwa futhi ukuze zingasivimbi ukuba ngaso linye. Ngokusho imiyalelo, "Pantovigar" - indlela multivitamin, okuyinto yakhiwa yi-keratin, D-calcium pantothenate, amino acid, amavithamini B1 kanye B5, imvubelo wezokwelapha kanye para-aminobenzoic acid. Naphezu amazwana eziningi ezinhle mayelana izidakamizwa, it has a kusimo abalulekile - intengo. Izindleko zokufaka, kubalwa ngenyanga kwesicelo kuyinto emhlabeni 1300-1400 ruble. Njengoba sazi ukuthi Yiqiniso watusa zinsiza - kusuka 3 kuya ku-6 izinyanga, impilo sivala yakho ngenxa ingandiza ku nesenti.
Okunye amaphilisi okuhlela izinwele zikhula zibheke ngakhona
Okuhle esebenza Vitamin amalungiselelo, okuyinto ingatholakala Pharmacy, kuyinto "Revalid" kalula. Ngo oyiyo uqukethe amavithamini B nama-amino acid, okuyinto ukukhuthaza ukukhula ukusekela ezipikili futhi izinwele impilo. Enye isethi, lapho, phakathi kwezinye izinto, kuba nomphumela omuhle emzimbeni sisonke - 'Alfabhethi'. Kuhlanganisa eziningi amaminerali ewusizo okunenzuzo ukuba ukukhula izinwele.
Umthengi Izibuyekezo mayelana Izithako ahlukahlukene izinwele zikhula zibheke ngakhona
Ngeshwa, ababaningi kungaba ukuziqhayisa zikanokusho "Hollywood" curls. Isizathu salokhu iyona Umbala njalo, perms, isitayela ashisayo usebenzisa si, varnishes futhi mousse t. D. Kodwa sibonga intuthuko, uba nethuba ukunciphisa zonke nomthelela omubi cha. kanjani amavithamini kanye amaphilisi okuhlela izinwele zikhula zibheke ngakhona? Umthengi Izibuyekezo ngazo ungafunda ngezansi:
umphumela usebenzisa izidakamizwa ayinaye izinwele zikhula ngokushesha;
kwabantu ikhanda lakho izinwele ngokuyinhloko zofuzo kunqunywa, ngakho akukho izinkinga zamazwe omhlaba onke amaphilisi musa ukukulungisa - ngamanye amazwi, ngeke izinwele ekhanda kathathu. Nokho zindlela kungaqinisa izinwele, ukuvimbela nezinwele, ukunweba ukuphila umjikelezo yabo.
Kukhona caveat encane - amaphilisi okuhlela ngalapho izinwele zikhula zibheke avuse ukuqiniswa kanye, eqinisweni, ukukhula kwabo wonke umzimba ... Ngenxa yalokho, baba ngaphezulu Waxing ubuhlungu, ngibenze cishe ababi. Yiqiniso, lolu lwazi lubalulekile ngokuyinhloko abesifazane. Futhi ekugcineni, iseluleko kancane: ikhwalithi izinwele kakhulu ibonisa isimo somzimba wethu wonkana, ngakho ngo parallel yokwamukela amaphilisi kufanele ngonanzelelo ukudla okunempilo, ukuze bagcine umbuso kosuku, futhi ngezikhathi ezithile ukuba kudlule ngihlolwa isimiso ngesikhathi udokotela ukuba khona.
"Baziron AC": ukubuyekezwa dermatologists. "Baziron AC" (gel): yokusetshenziswa, incazelo kanye nozakwabo eshibhile
Wazi kanjani ukuthi kukhona ukuntuleka kwe-iodine emzimbeni, izimpawu impikiswano.
"Tsinariks" OKUBI: yokusetshenziswa, intengo, kanye nokubuyekeza
Mayelana ngekusasa lempilo yesintu ingane ikhombisa evamile isisindo sengane ngeviki
Haunch yengulube kuhhavini
Indlela ukunciphisa ivolumu okhalweni? iseluleko professional
Kuhle sauce ashisayo emhlabeni. Isoso ebabayo "Tabasco", usoso Thai, Chili sauce: Ungadliwa